Waa ma dhammaato dooda ku aadan midkee xariifsan Ronaldo iyo Messi…(David Beckham oo markiisa ka hadlay) – Gool FM
Waa ma dhammaato dooda ku aadan midkee xariifsan Ronaldo iyo Messi…(David Beckham oo markiisa ka hadlay)
(England) 21 Maajo 2016. Waa ma dhammaato dooda ku aadan yaa laacibsan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Waxaa markan doorkiisa ka qaatay oo ka hadlay sheekadan laacibkii hore ee xulka England David Beckham inkastuu diiday inuu mid u codeeyo oo uu ku sheego inuu yahay midka laacibsan.
Goor dhow ayay ahayd markii uu tababare Sir Alex Ferguson ka hadlay Messi iyo Ronaldo wuxuuna sheegay in Messi yahay uun laacib Barcelona ah laakiin Ronaldo uu saddexleey dhalin karo isagoo u ciyaarayo xitaa kooxda yar ee Stockport County, wuxuu kaloo ku sheegay inuu ku fiican yahay kubbadaha sare ee madaxa lagu dhaliyo iyo waliba inuu ku fiican yahay labada lug.
Sikastaba Beckham oo markiisa ka hadlaya dooda ku aadan labadan laacib ayaa yiri: “Dooda ku aadan labada laacib wax macno wayn ah iima sameynayso aniga.
“Labadoodu waa naadir, waxyar sida Zidane waayihiisa.
“Waynu xasuusnaan doonnaa inaan wada heyso Messi iyo Ronaldo isla hal waqti.
“Ma jirto cid heshay heerkaa isla markaana waqti badan ku sii dhagaatay.”.
Ronaldo iyo Messi ayaa ah laacibiinta ugu fiican kubbada cagta waqtigan haddii aysanba noqon kuwii ugu fiicnaa ebid taariikhda kubbada cagta, waxay qeybsadeen sideedii Ballon d’Or ee ugu dambeysay inkastuu Messi la tagay shan ka mid ah abaal marintaas laacibka ugu fiican adduunka.
DAAWO: Leonel Vangioni oo caawa daawan doona kulanka AC Milan vs Juventus
''Weligeey baan ku riyoonayey inaan Milan u ciyaaro'' - Leonel Vangioni oo hadlay + Video